वर्तमान समयमा कृषकको समस्या र न्यूनीकरण ” विषयक कार्यक्रम सम्पन्न - Aadil Times
08 May 2022२५ बैशाख २०७९, आईतवार
मेरो उम्मेदवारी समग्र हरदौनावासीको विकासको लागि हो: शफीक हुसेन हरिनगरमा काँग्रेसबाट माओवादीमा प्रवेश हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा के फाइदा हुन्छ? काठमाडौँ महानगरको मेयरकी उम्मेदवार सिंहले सार्वजनिक गरिन् ७ संकल्प अवैध चितुवाको छालासहित तीन जना पक्राउ नक्कली चिकित्सक पक्राउ
वर्तमान समयमा कृषकको समस्या र न्यूनीकरण ” विषयक कार्यक्रम सम्पन्न
१ माघ २०७८, शनिबार २२:३४ | Aadil Times
आदिल टाइम्स, काठमांडौ।
एस टुगेदर वी क्यान द्वारा माघे संक्रान्ति को अवसरमा आयोजित
४१औं सत्रमा “ वर्तमान समयमा कृषकको समस्या र न्यूनीकरण ” विषयक कार्यक्रम अत्यन्त सफलतापूर्वक संपन्न भएकोछ ।
संस्थाका कार्यसमिति सदस्य ओम शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा
दस जना सहभागी वक्ताहरुले आफ्नो अमूल्य मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
संस्थाका सचिव शमशाद आदिलले कार्यक्रम प्रति प्रकाश पार्दै
किसानका छोरा छोरीहरुलाई ऑफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन र अहिले मधेसमा भईरहेको आंदोलनलाई सकारात्मक ढंगले व्यस्थापन गर्न गराउन तर्फ युवाहरु बाट हुनसक्ने पहलहरु बारे कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए। साथै उनले स्वागत मन्तब्य दिने क्रममा कृषि व्यसायलाई सम्मानित पेशाको रुपमा लिदै कृषकहरुलाई निश्चित उमेर गुजारी सके पछि पेन्शनको बन्दोबस्त गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सहभागी वक्ताहरूको तर्फबाट निम्न तवरको विचार अभिव्यक्त भएका छन ।
श्रवण यादवले “ कृषकको समस्या समाधान न गरि नेपालको विकासले गति लिन नसक्ने ” बताए ।
डी के यादवले किसानका सन्तानहरु काठमांडौमा स्वयम आफ्नै आमा बुवा अर्थात कृषकको मुद्दा विर्सिने गरेको बताए ।
शिव यादवले किसानको समस्याहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले राज्यले इच्छा नदेखाएको आरोप लगाए । किसानले सत्ता हैन समाधान मात्रै खोजेको उनले जिकिर गरे ।
आशिक अलीले राजनैतिक स्थिरता नरहेको कारण किसानहरुले दुःख पाउने बताए ।
साथै उनले लामो विचार राख्दै कृषि बारे अष्पष्ट कृषिनीति हुनुको साथै दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको ठहर गर्दै अनेंकौँ समस्या उतपन्न भएको बताए ।
चन्द्रभुषण यादवले किसानलाई चाहिने मल जल र फल को समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहज रहेको विश्वास व्यक्त गरे । राजनैतिक पार्टीमा किसानको मुद्दा बारे हैन ठेका पट्टा बारे मात्रै चर्चा हुनेगरेको दुःख व्यक्त गरे ।
दीपक यादवले वर्तमान समयमा किसानी रहर हैन बाध्यतापूर्वक मात्र अपनाइने गरेको बताए। योजना पूर्वक अगाडि बढ़े मात्र किसानहरूको दुःखमा कमी ल्याउन सक्ने बताए।
दिवस पटेलले कृषि एक प्रोफेशन हो
यस प्रोफेशनलाई सम्मान दिनुपर्ने बताए। हामीले आरोप प्रत्यारोप मात्रै गरेर केहि हुदैन परिवर्तन ल्याउनको निम्ति जोश र होशका साथ अगाडि बढ़नुपर्ने विचार राखे ।
आदित्यनाथ यादवले एस टुगेदरले समाधान गर्ने बाटोमा जानू पर्ने कुरा राखे
रसना यादवले वर्तमान समयमा कृषकहरूको घरमा चाहिने आवश्यकता अनुसार मात्रै बालीहरूको उत्पादन गर्ने गरेको बताईन । उनले आफ्नो कुरा थप्दै प्राङगारिक मल र कृषि एन बनाउन जोड़ दिनु पर्ने बताईन ।साथै
लक्षित वर्ग सम्म सरकारको अनुदान पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने दुःख व्यक्त गरिन ।
रचना साहले पनि अन्तिम कृषि पेशा अत्यन्त साहसी र ईमानदारीको पेशा रहेको बताउदै युवावर्ग अध्ययन अनुसन्धान गरेर फलदायी कदम अगाडि बढाउनु पर्ने बताईन ।
सहभागी वक्ताहरूको मन्तब्य लाई गहन तरीकाले समीक्षा गर्दै संस्थाका उपाध्यक्ष आदर्श सहनीले सबैको धन्यवाद ज्ञापन गरे । साथै उनले भारतको किसान आंदोलनबाट पाठ सिक्नु पर्ने बताए। उनले भने “ कृषकहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्रिय मास्टर प्लान चाहिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो जम्मा बजेटको ३/४ प्रतिशत मात्रै रकम कृषि क्षेत्र लगानी गर्ने नीति गलत रहेको बताए। जीडीपीमा ३०-३५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मात्र ३/४ प्रतिशत बजेट प्रशस्त नभएको बताए।
अन्त्यमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष चूड़ामणि यादवले सभापतिको हैसियत उद्देश्य प्राप्तिमा कार्यक्रम सफ़ल रहेको बताए । सिंडिकेटको अन्त्य गर्दै कृषकको अधिकार भन्ने धाराहरु संविधानमा समेटिनु पर्ने बताउदै कार्यक्रमलाई समापन गरेको घोषणा गरे ।
मेरो उम्मेदवारी समग्र हरदौनावासीको विकासको लागि हो: शफीक हुसेन
हरिनगरमा काँग्रेसबाट माओवादीमा प्रवेश
काठमाडौँ महानगरको मेयरकी उम्मेदवार सिंहले सार्वजनिक गरिन् ७ संकल्प
अवैध चितुवाको छालासहित तीन जना पक्राउ
चट्याङ पर्दा लागेको आगलागीबाट दुई घर जलेर नष्ट
हरिनगर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा दिलो मोहम्मद को उम्मेदवारी दर्ता
हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा के फाइदा हुन्छ?
म्याग्दीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु